April 25, 2020 - Online Hartha
“ပရိတ်တွေ ပဌာန်းတွေ ရွတ်နေလို့ ကိုရိုနာရောဂါကြီးက ပျောက်သွားမှာလား…???” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ ယုတ္တိရှိရှိဖြေကြားချက် ….
” အရှင်ဘုရားတို့..ညစဉ် ပဌာန်းရွတ်၊ရတနသုတ်တွေရွတ်နေရုံနဲ့ Covid.19ရောဂါ ပျောက်မယ်ထင်လို့လား။? တပည့်တော်အမြင်ကတော့ လုံးဝမ‌သက်ဆိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်။ အဲဒီယုံကြည်မှုတွေက ဒုက္ခရောက်မဲ့ယုံကြည်မှုတွေလို့မြင်တယ် ဘုရား။တပည့်တော် ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ပါ တရားနာရလို့ ဖားလေး နတ်ဖြစ်တာ၊လင်းနို့သားတွေ ရဟန္တာဖြစ်တာမပြောနဲ့ဘုရား..တပည့်တော်မယုံဘူး..တဲ့။( ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ရဲ့စာပါ။ ) ” အော်..ကျောင်းဆရာကိုး။ ဒကာရေ့..ဘေးနားမှာ လျှပ်စစ်မီးလွှတ်ထားတဲ့ဝါယာစလေးများရှိရင်..လက်နဲ့ကိုင်လိုက်စမ်းပါ။ ဓာတ်လိုက်ပြီးသေသွားလိမ့်မယ်‌နော်။ လျှပ်စစ်ဟာ သက်မဲ့ဆိုပေမဲ့..ဓာတ်ကူးပြီးအစွမ်းပြ လူသတ်နိုင်တယ် ဒကာရဲ့။မယုံဘူးဆိုပြီး သွားမစမ်းနဲ့နော်ဒကာ။ (ဒကာ..စာတတ်အောင်သင်ဖူးခဲ့မယ်ဆိုရင် chemistry မှာ ဓာတ်ပြုခြင်း၊ဓာတ်ကူးခြင်းသဘောတွေ နားလည်မှာပါ။ အလွတ်ကျက်အောင်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒကာရဲ့။) နောက်တစ်ချက်က..ဒကာဟာ ကျောင်းဆရာဖြစ်နေပေမဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့စွမ်းအားကိုနားမလည်တဲ့ကျောင်းဆရာဖြစ်နေတာကတပည့်တွေအတွက် ကံဆိုးမှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒကာက ရုန့်ရင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပစ်ပေါက်နေမယ်(ဆဲနေမယ်) ဆိုရင်..အဲဒီစကားလုံးတွေကအဆဲခံရသူထံ ကူးသွားပြီး အစွမ်းပြလိမ့်မယ်ဒကာ။လောဘ၊ဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးမငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ချက်ခြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မတွေးဝံ့စရာ ရလာဒ်တွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ( စကားလုံးတွေကအစွမ်းပြလို့ လူသတ်၊ထောင်ကျ၊ဒုက္ခရောက်နေသူ တွေကို ဒကာကြားဖူးမှာပါ။) နည်းပေး၊လမ်းညွှန်၊ဆိုဆုံးမစကားတွေ၊ကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေ၊ သူရဲကောင်းတွေရဲ့သမိုင်းတွေ၊ မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူတို့ရဲ့ အကြောင်းတွေကို … Read more
မင်းတို့ကသူဌေးလေဆိုပြီး စော်ကားထားတဲ့သူတွေကို ဦးအောင်(အောင်သမာဓိ)ပြော… (ရုပ်သံ)
မင်းတို့ကသူဌေးလေဆိုပြီး စော်ကားထားတဲ့သူတွေကို ဦးအောင်(အောင်သမာဓိ)ပြော Video (2)မိနစ်…. မျှမျှတတ တွေးတတ်ရတယ် ငါကသူဌေးဆိုပြီးတော့လည်း ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကို အပြစ်မတင်နဲ့… ငါကဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း သူဌေးကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့…. သူအခက်အခဲ နဲ့သူရှိကြတာပဲ ဒါကို လိုက်ပြီးဖောင်ထုနေမယ့် အစား မျှမျှတတ တွေးပေးပါလို့လည်း ပြောပါရစေဗျာ…. ကိုယ့်အခက်အခဲ ကိုပဲကြည့်နေရင်တော့ သူများ အခက်အခဲကိုမြင်နိုင်မှာ မဟုပါဘူး…..။မင်းကမှ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး မတ်တတ်စာပဲရှာထားကိုလို့လဲ ပြောဆိုထားတာကို တွေ့မြင်ကြရမှာ ပါ လေးစားစွာဖြင့် ဘူးသီး….. “သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် မျှတွေးတတ်ရတယ် …. မင်း တို့ ကသူ ဌေး လေ ဆို ပြီး စော် ကား ထား တဲ့ သူ တွေ ကြည့် ဘို့ Video (2) မိ နစ်။ … Read more